» कलिउड/गीत संगीत
चितवन – गठबन्धनको भागबण्डामा भरतपुर महानगरपालिका नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चत भएपछि रेनु दाहालको चुनावी गीत सार्वजनिक भएको छ ।गीतमा स्वयंम नेतृ रेनु दाहाललाई देख्न सकिन्छ । गीतमा मेयर दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा ५ वर्षे कार्यकालमा गरेका कामको...
कांग्रेसले चुनावलक्षित उत्कृष्ट गीत बनाउनेलाई २ लाख ७५ हजार पुरस्कार दिने
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलक्षित पार्टीका लागि उत्कृष्ट गीत रचना गर्नेलाई पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत नेतृत्वको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समिति अन्तर्गत सांस्कृतिक समन्वय उपसमितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर उत्कृष्ट...
भरतपुर – सुपक अधिकारीले पहिलो पटक नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । अस्ट्रेलीयामा बसोबास गर्दै आएका पोखराका अधिकारीले पहिलो पटक माया प्रेमसँग सम्बन्धि ‘गड्यो प्यार दिलमा ’ बोलको गजल गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रेमीको मायामा एकोहोरो भएको विषयलाई गजलमा...
गायकद्वय प्रवीण भेडवाल, वसन्त थापामगर र गायिकाद्वय रचना रिमाल तथा सुशीला पाठकको स्वरमा रहेको ‘म त परे पूर्वको’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा वसन्त थापामगरको शब्द तथा संगीत छ र दिनेश श्रेष्ठको एरेञ्ज छ । वसन्त...
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ आजबाट देसभर प्रदर्शनमा
नेपाली चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ आजबाट देसभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मका निर्देशक सुदर्शन थापाका अनुसार देशमा कोरोना भाइरस आउनुअघि नै प्रदर्शनको लागि तयारी गरिएको थियो तर काेराेना महामारीमा फिल्म प्रदर्शनमा आउन सकेन। ‘कुनै एक चलचित्र मात्र नभई पुरै...
साउथ स्टार पुनीत राजकुमारको ४६ वर्षको उमेरमा निधन
एजेन्सी – साउथ फिल्मका स्टार पुनीत राजकुमारको निधन भएको छ । उनको हृदयाघातका कारण निधन भएको हो । आज बिहान उनको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएपछि उनलाई बेग्लुरुको विक्रम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालमा भर्ना भएका पुनीतको निधन भएको भारतीय...
बिनोदको ‘ठोरी धामैमा’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
ठोरी – पर्साको ठोरी गाउँपालिकाको धार्मिक पर्यटनलाई समेटिएको ‘ठोरी धामैमा’ बोलको भजन सार्वजनिक भएको छ । उक्त भजन केही दिन अघि मात्रै युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक भजनको शब्द बिनोद कुमार बस्नेतले लेखेका हुन् । भजनमा बिनोदसँगै सरोज लामिछाने...
परदेशीको यादमा अपेक्षा (भिडियोसहित)
चितवन – गायिक अपेक्षा गिरीको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । आइतबार गायिका गिरीको आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत ‘निष्ठुरी परदेशी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक गीतको शब्द गायिका गिरी आँफैले लेखेकी हुन् । गीतमा संगीत अर्जुन पोख्रेलले भरेका छन्...
चितवन – चितवनमा दशैंमा पनि सिनेमा हलहरु नखुल्ने भएका छन् । निषेधाज्ञाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका चितवनका सिनेमा हलहरु दशैंमा पनि नखुल्ने भएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिइसकेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी...
भिटेनले अब रत्नपार्कमा काम गर्ने, कती छ पारिश्रमिक ?
चितवन – चर्चित र्यापर समिर घिसिङ ‘भिटेन’ले ‘रत्नपार्क’ मा काम गर्ने भएका छन् । उनले बुढासुब्बा ओर्जिनलले निर्माण गर्ने चलचित्र ‘रत्नपार्क’ साइन गरेको हुन् । चलचित्रका निर्माता नवराज गिरीले भिटेनले चलचित्रमा काम गर्न लागेको पुष्टी गरे । भिटेनले चलचित्रका लागि...